किन माछा र भ्यागुताहरूको वर्षा हुन्छ। | नेटवर्क मौसम विज्ञान
प्रकृतिले शुरूदेखि नै अचम्म मान्छेहरूलाई रोक्दैन। चरम प्राकृतिक घटना यसले तपाईंको मुख खोल्यो र अनौंठो घटनाहरू भयो। माछा र भ्यागुताको वर्षा यो एक घटना हो जुन २०० एडीको हो। सी र त्यस पछि तिनीहरू मध्ये केही यस्तो भयो जसले तपाईंलाई साँच्चिकै अचम्मित पार्दछ। यद्यपि त्यहाँ मुख्यतया माछा र भ्यागुताका वर्षा छन्, गँड्यौलाहरू र चूहों पनि भेटिए। त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले पशुको वर्षामा यसका सारहरू प्रस्तुत गर्दछन्, किनकि तपाईं कहाँबाट अचम्म मान्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नुहुन्न।
यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई ती सबै रहस्यहरू बताउन जाँदैछौं कि यी अनौंठो घटनाले लुक्छ र के हो उत्पत्ति। के तपाईं माछा र भ्यागुताको वर्षाको पछि सत्य पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ? थप जान्नको लागि पढिरहनुहोस्।
1 शहरी वास्तविकता वा पौराणिक कथा?
2 पशु वर्षाको वास्तविक घटनाहरू
3 घटनाको फाइदा लिनुहोस्
4 माछा र भ्यागुताको वर्षाको परिकल्पना
शहरी वास्तविकता वा पौराणिक कथा?
जनावरहरू वर्षा भएको सोच्न पूर्ण पागल हो। त्यहाँ केहि छन् जो यस प्रकारको वर्षालाई दिव्य केहि विशेषता दिन्छन्। परमेश्वर (वा ईश्वरहरू) बाट केही प्रकारको सजाय जसले हामीलाई हाम्रो पापहरूको प्रायश्चित गर्नका लागि बाहिर निकाल्नुभयो। अन्य skeptics उनीहरू यी वर्षाको अस्तित्वमा शंका गर्छन् र तिनीहरूमा विश्वास गर्दैनन्। धार्मिक आन्दोलनको परिणाम र परमेश्वरको आज्ञापालनको बारेमा नाराहरू वा संसारको अन्तको घोषणा यस्तो आविष्कारको कारण हुन सक्छ।
यद्यपि त्यहाँ वास्तविक गवाही र प्रमाणहरू छन् जुन माछा र भ्यागुताहरूको वर्षा रहेको छ। १ 1997 XNUMX In मा, एक कोरियाली माछावाला फ्रिज स्क्वाइडले ढकढक्यायो त्यो सीधा आकाश बाट आयो यस्तो गिरावटको सामना गर्नुपर्दा, माछाले गति लिन्छ र टाउकोमा कडा हिर्काउँछ, प्रत्यक्ष सीधा बेहोशी हुन्छ। माछावाला दुई दिनसम्म बेहोस भए र दिमागमा क्षति भयो। दुबै उसका साथीहरू र उनले दावी गरे कि उनी न त आक्रमण गरिएको थियो न त उनले रिजर्भमा कुनै माछा पाए। कसैले पनि कारण बताउन सकेन कि फ्रोजन स्क्विड आकाशबाट किन खस्यो।
र यो यो हो कि जनावरहरूको यी वर्षा शहरी किंवदन्तीहरू छैनन् किनकि उनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यहाँ असंख्य राम्रा दस्तावेज प्रमाणहरू छन् जुन वास्तविकता देखाउँदछन्। २०१ special मा चित्रित गरिएको विशेष घटना भयो। एक ब्राजिलियन केटा आफ्नो कारको साथ ड्राईभ गर्दै थिए जब अचानक, हजारौं माकुरो उसको टाउकोमा आकाशबाट खसिन थाले। यस घटनाले धेरै व्यक्तिलाई अवाक् गर्न छोडेको थियो, यो कसरी भयो भनेर थाहा नपाई, यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास मात्र गर्न सक्थ्यो।
अर्को कार्यक्रम मा पोस्ट गरियो न्यूयोर्क टाइम्स यो तब भयो जब एक रूसी माछा मार्ने जहाज डुबायो किनभने केही थिएन र आकाशबाट खसेको गाई भन्दा केही पनि थिएन। एउटा गाईले आकाशमा के गरिरहेको छ?
पशु वर्षाको वास्तविक घटनाहरू
यी अनौठो र विरलै घटनाहरूका साथ समस्या यो छ कि यो साहित्यिक कल्पनाहरूले भरिएको छ र त्यहाँ धर्महरूको बारेमा इन्टरनेटमा धेरै छलकपट छ। ग्रीक वक्तृत्वज्ञ एथेनाउसले विद्वानहरुका २००। ईस्वीमा भएको भोजको बारेमा बोले। यो असाधारण घटनाको बारेमा हामीसंग पहिलो प्रमाण छ। यस भोजमा उनले आश्वासन दिए कि तिनीहरू days दिन माछा वर्षासँगै थिए। थप रूपमा, Peloponnese मा एक कथा छ जहाँ यो भनिन्छ कि त्यहाँ थियो भ्यागुताको महामारी।
हालसालै, १1578 मा, यो दावी गरिएको छ कि बर्गन (नर्वे) मा एक रहस्यमय चूहा तूफान द्वारा हिट थियो। मलाई थाहा छैन जुन तीन वर्षाको भन्दा खराब हो। म मुसाको विकल्प लिने छु, किनकि तिनीहरू रोग सार्ने आश्वासन दिन्छन्।
१ 1870० मा, पेन्सल्भेनियामा, यो भयो घोंघा को एक विशाल स्नान चेस्टर शहर मा। घोंघा यति धेरै थियो कि उनीहरूले यो घटनालाई "एउटा ठूलो आँधी भित्रको आँधी हो" भने। २०० In मा एक जेली फिश स्नान बाथ शहरमा रेकर्ड गरिएको थियो।
धेरै अधिक हालसालै भएको थियो किरा र कीराको एक वर्षा २०० in मा लुइसियानामा, स्कटल्याण्ड २०११ मा फुटबल खेल खेलिरहेको बेलामा पनि त्यस्तै भयो र २०१ 2007 मा नर्वेमा पनि। यी सबै रेकर्ड गरिएका घटनाहरू यी वर्षाको अस्तित्वको अकाट्य प्रमाण हुन्।
यद्यपि त्यहाँ यस्तै प्रकारका वर्षाहरू छन्, प्राय: भ्यागुता र माछा हुन्। १ s १ in मा जिब्राल्टरमा १ 1915 १, मा नेफप्लिओ र सर्बियामा भ्यागुताहरूको वर्षा भएको थियो। यी वर्षाका केही साक्षीहरू भ्यागुताहरू पनि त्यहाँका मूल मानिसजस्तो नभएको कुरा पुष्टि गर्दछन्। उदाहरणको लागि, सर्बियामा भएको वर्षाको बारेमा, एक साक्षीले आश्वासन दिए कि त्यहाँ हरियो रंग भएको कुनै पनि कछुवाहरू छैनन् तर तिनीहरू खरानी र छिटो थिए।
घटनाको फाइदा लिनुहोस्
त्यहाँ शहरहरू छन् जुन आकाशका उपहारका रूपमा यस प्रकारका पशु वर्षाको फाइदा लिन्छन्। २०१ 2014 मा श्रीलंकामा, शहरको छाना र सडकहरूमा माछाको नुहाउने ठाउँ थियो। गाउँलेहरूले त्यो उपहारको फाइदा उठाए kg० किलोग्राम भन्दा बढी तौलको माछाको चाड मनाउन। गिरावटबाट बाँचेको माछा पछि खानाको रूपमा सेवाको लागि स were्कलन गरियो।
अन्य देशहरुमा योरो (होन्डुरस) मा प्रत्येक वर्ष मे देखि जुलाई सम्म, स्वर्गबाट ​​ठूलो फसल उत्सुकताका साथ कुर्दै छ। र त्यो हो त्यहाँ एक चाड छ जुन माछाको यस वर्षाको सम्झना गर्दछ। यो असाधारण घटना घट्नेछ भन्ने संकेत एक ठूलो गाढा बादल हो जसले जनावरहरूको आँधीबेहरी निम्त्याउँछ। यो चमत्कारी वर्षा समुदायले खाना पकाउन र खानको लागि बासिन्दाहरू प्रयोग गर्दछ।
माछा र भ्यागुताको वर्षाको परिकल्पना
यस जीवनमा सबै चीज (वा सबै चीज) जस्तै, तपाईंले यसलाई बुझाउनु पर्छ। जनावरहरूको यस वर्षाको अस्तित्वको बारेमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा कल्पित परिकल्पना केहि शक्तिशाली आँधीबेहरी द्वारा sucked र जमीन मा जारी छ, महान दूरी यात्रा।
ईन्सेन्ट्रिक थियरीहरू ठाउँभन्दा बाहिर छन् किनकि ईश्वरीय क्रोध, अन्य जीवहरूले अन्य ग्रहमा यात्रा गर्नु अघि अतिरिक्त खानाबाट छुटकारा पाउन खोज्दछन्। आँधीबेहरी सिद्धान्तमा यो टिप्पणी गरिएको छ कि केही जनावरहरू यी आँधीबेहरीबाट जोगिन्छन्, अरूहरू हावाको चाप र बलले कुचिन्छन्, अरूहरू, ऊंचाईमा कम तापमानको कारण, स्थिर जमेको हुन्छ।
मेरो विचारमा, फ्रोजन स्क्विडको जस्तो केहि पृथक केसहरू साना प्लेनहरूमा जान सक्ने केही pranksters को परिणाम हुन सक्छ। तपाईंलाई कहिले थाहा हुँदैन कि मानव के गर्न इच्छुक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » माछा र भ्यागुताको वर्षा